> Resource > iPhone > Sida loo Undelete iPhone Data (oo ay ku jiraan iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS)
Si kasta oo ay u undelete xogta iPhone?
Waxaan si qalad ah la tirtiro photos aan safarka qoyska on my iPhone 4, raad raac lahayn dabcan. Waxaan ognahay inay jiraan barnaamijyo Macdan karaan gurmad Lugood, laakiin waxa aan u baahan tahay waa in iskaan aan iPhone in xogta undelete ka iPhone 4. Ma jiraa hab kasta oo taas loo sameeyo?
Niyadda ha ka jebin. Waxaa jira had iyo jeer sidan oo kale in aynu kartaa in aad si toos ah baarista iPhone in undelete files waxa ku yahay. Si loo isticmaalo shakhsi, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) waa kuwa ugu horeysay ka soo baxay sanadkii 2012, si gooni gooni ah u Mac iyo Windows isticmaala. Labada iyaga ka mid ah waa la isku halayn karo oo xirfadle ah arrin. Waxaad u isticmaali kartaa si toos ah xogta undelete baarista iPhone ku yaal, ama u isticmaali Macdan aad Lugood gurmad file.
Haddii aad hadda ka joogno xaaladda ka iPhone badiyay xogta, waxa ay noqon doontaa doorasho wanaagsan in ay isku day la Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan xogta la marsiiyey ka hor inta aadan soo kabsado iyaga.
Download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day ah. Xusuusnow in aad doorato version saxda ah.
Sida loo undelete files ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Si undelete xogta ka iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, ama iPhone 3GS, version Windows iyo shaqada version Mac si la mid ah. Next, aynu qaadan version Windows sida tusaale.
Connect aad iPhone in computer iyo ordi barnaamijka, oo markaas waxaad heli doontaa daaqad hoos ku qoran.
Fiiro Gaar ah: Waxa jira wax aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso oo aad ka hor inta wax kale samayn. Calan aad iPhone in hab dayuurada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib marka aad ula kac loo tirtiro xogta ku yaal. Howlgal kasta oo ku iPhone ka magdhaw in xogta aad tirtiray keeni kara, sida overwriting.
Wixii iPhone 5 iyo iPhone 4s:
Wixii iPhone 4 iyo iPhone 3GS: Download a fur-in marka aad halkan u joognaa.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone si aad u hesho xogta lumay
Wixii iPhone 5 / 4s users, kaliya aad u baahan tahay si ay u riix Start Scan si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal. Sida ay u iPhone 4 iyo iPhone users 3GS, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka aad iPhone ayaa ka hor inta laga baarayo. Oo raac hoose si aad u dhammayn,
Riixayo Power oo Home badhamada isku mar muddo 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo batoonka, Laakiinse ay xajiyaan haysta Home kale 15 ilbiriqsi.
Haddii aad ku guuldareysatay markii hore, kaliya mar kale isku dayaan, ilaa aad u sheegay in aad ku soo gashay hab iskaanka iyo barnaamijka bilaabmin aad ka baareyso iPhone sida soo socota.
Tallaabada 3. xog Undelete ka iPhone
Skaanka aad qaadan doonta muddo. Haddii aad qabto wax badan oo data, waxaa laga yaabaa in aad qaadato wakhti ka sii dheer. Marka uu dhammaado, waxaad ka heli doontaa natiijo scan sida soo socota. Dhammaan xogta laga helay waxaa lagu soo bandhigay qaybaha, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, wac gasho, iwm Waxaad ku eegaan karo oo dhan oo iyaga ka mid mid. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka halkan ayaa laga yihiin ma ahan oo keliya kuwa dhawaan la tirtiro, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa haatan aad iPhone. Waxaad isticmaali kartaa button slide ku saabsan hogaanka si ay u kala soocaan: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.